६४ वर्षीय वृद्ध अम्बिका भन्छिन- मेरो छोरालाई गो’ली हा’न्‍ने अधिकार कसले दियो ? – Sanjal Nepal
Homeसमाचार६४ वर्षीय वृद्ध अम्बिका भन्छिन- मेरो छोरालाई गो’ली हा’न्‍ने अधिकार कसले दियो ?
November 28, 2020 admin समाचार 1462
बर्दिबास: प्रहरीको गो,लीले ६४ वर्षीय वृद्ध अम्बिका न्यौपानेको छोरा, सञ्जय न्यौपाने खोस्यो । पतीको मृ,त्युले गंगा न्यौपानेको सिउँदो पुच्छियो । उनका तीन सन्तान टु’हुरो भए। अन्याय वि’रुद्ध बोल्ने महोत्तरीको बर्दिबास-१ का ४२ वर्षीय सञ्जय न्यौपाने अब रहेनन् । उनको मृ,त्युले गाउँ शो’कमा डुबेको छ । गाउँलेहरुले प्रहरी वि’रुद्ध तीनसम्म राजमार्ग ब’न्द गराएर प्रदर्शन गरे ।
November 2, 2020 admin समाचार 4691
हास्य कलाकार भोक लाग्यो (देवीराम पराजुली) को आमाको निधन, देवीराम भने अमेरिकामा
November 18, 2020 admin समाचार 3614
मुम्बई । हास्य कलाकार देवीराम पराजुलीको आमाको निधन भएको छ । टेलिसिरियलमा ‘भोक लाग्यो’ नामले परिचित उनको आमाको निधन भएको हो । उनी लामो समय देखि अस्वस्थ्य थिइन् । उनकी आमा धनकुमारी पराजुलीको आज बिहान
November 17, 2020 admin समाचार 7977
काठमाडौँ — साउदी अरबको कुरैयात जे’लमा रहेका सन्तबहादुर पुन पछिल्लो पाँच महिनादेखि दूतावासको सम्पर्कमा आएनन् । नियमित सम्पर्कमा आइराख्ने उनी बेख’बर बनेपछि दूतावास झ’स्कियो, कतै उनीमाथि २० वर्षअघि सुनाइएको मृ’त्युद’ण्डको सजा’य कार्यान्वयन त भएन ? उनको अवस्था
LEX 18 agenda conversation: Job club (406901)
सञ्जेललाई कुटपिट गर्ने कर्मचारी बर्खास्त, अभद्र व्यवहार मुद्दामा म्याद थप (381468)
Hello world! (316357)
A above Googler and career teach says you shouldn’t at all times flip your ardour intoaabounding-time job (291047)
Technology Training Company Coding Dojo to Open Boise Campus at Trailhead (104916)